Taorian’ny Fidarohana Nahafaty Tanora Iray, Mitaky Lalàna Henjana Kokoa Ny Shinoa Mba Hampitsaharana Ny Fampijaliana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Mey 2016 6:15 GMT
Miresaka momba ny nahafatesan'ny zanany lahy ao amin'ny CCTV ny renin'i Zhang. Pikantsary tamin'ny fàfana.
Ny 23 Aprily teo, nodarohana mandra-pahafatiny ny zazalahy iray 15 taona antsoina hoe Zhang Chaofan avy ao amin'ny fari-piadidian'i Yun Cheng ao amin'ny faritany Shan Xi any Shina. Mpiara-mianatra aminy ihany ireo enina voarohirohy.
Notazonin'ny polisy hanaovana fanadihadiana ireo enina ireo. Raha mbola tsy nivoaka amin'ny fomba ofisialy ny vokatra avy amin'izy ireo, hitan'ny renin'ilay niharam-boina, tamin'ny alàlan'ny famakiana ny resadresaka nifanaovan'ireo mpiara-mianatra aminy tao anaty vondrona iray nisy ny zanany, fa niharan'ny fampijaliana ny zanany lahy.
Tao anaty tafa iray nifanaovany tamin'ny fahitalavi-panjakana CCTV no namaritany ilay tranga. Ho azy dia nitaky vola taminy foana ireo mpiara-mianatra taminy. Ny niafaràny dia nijanona tsy nandeha nianatra izy ary nanomboka niasa taminà “Cybercafé “. Tao izy no voadaroka nandritry ny ora maro, voalaza fa ireo mpiara-mianatra taminy izay nampijaly azy fahiny ihany no nanao izany. Maty noho ny ratra tany amin'ny atidoha sy noho ny fahatapahana tany amin'ny fo sy havokavoka ilay tovolahy.
Telo volana lasa izay, efa nisy tranganà herisetra an-tsekoly nitovitovy tamin'io fanaon'ny ankizy anatin'izany taona izany tao Shina. Tao amin'ny tanànan'i Rizhao, faritanin'i Shandong, nisy zazalahy nodarohan'ny ankizy dimy mpiara-mianatra aminy ary noterena hihinana tay tao amin'ny toeram-pivoahan'ny lisea iray. Ampolony ireo mpiara-mianatra no nahita maso ilay tranga, nihorakoraka namporisika ireo mpampijaly. Nisy ihany koa ny nandrakitra lahatsary sy nampakatra izany tao amin'ny aterineto ny 16 May teo. Nilaza tamin'ny media ny polisy ao an-toerana fa voalamin'ny fianakavian'ireo voarohirohy izy samy izy tany ny raharaha ka tsy nilàna fanadihadiana momba ny heloka bevava.
Ny 25 Aprily, nisy lahatsary roa niely be tety anaty media sosialy nampiseho ankizivavy iray tao Anxin noterena handohalika. Ankizivavy iray niankanjo mainty no mamelaka tehamaina azy eny amin'ny tavany, misintona ny volony, mandaka azy ary midaroka azy aminà hazo, manery azy hanaisotra ny fitafiany rehetra. Toa marobe ireo olona nandrisika ilay herisetra sy nandrakitra ilay tranga ho anaty lahatsary. Ankizivavy roa tao an-tanàna no nosamborn'ny polisy, saingy tsy nisy intsony ny fanarahana ny tatitra momba ireo fiampangana heloka bevava napetraka.
Ary ny 17 Febroary, tanora Shinoa telo mianatra amin'ny lisea any Etazonia no voasazy 13 taona, enina taona ary 10 taona an-tranomaizina any, noho ny fampijaliana nataon-dry zareo taminà ankizivavy roa. Noteren'ireo mpampijaly hanaisotra ny akanjony ireo ankizivavy roa, nodorany tamin'ny afon-tsigara ny lohanono, nofelahany ny tavany ary noboriany ny volony.
Ho an'ny Shinoa maro, asehon'ilay tranga farany fa tsy matotra ny fomba fiatrehan'ireo manampahefana ny herisetra ataon'ny tanora, indrindra fa raha ampitahaina amin'ny any Etazonia. Nitarika ny sain'ny vahoaka ihany koa io ho any amin'ilay Lalàna Shinoa Hiarovana Ny Tsy Ampy Taona, izay nolaniana tamin'ny 2007. Faritan'ilay lalàna hoe tsy ampy taona izay rehetra ambanin'ny 18 taona ary lazainy fa rehefa miatrika ireo tsy ampy taona, ny fitsipika ho fanabeazana no tokony hampiharin'ireo sampana rehetra mpampihatra lalàna fa tsy hoe fotsiny hanasazy, amin'ny fampihenàna na fanesorana ny maha-tomponandraikitra azy ireo (Artikla 54).
Efa fantatra rahateo fa tsy afa-miala amin'ny kolikoly ireo manampahefana ao Shina, maro no mino fa ilay lalàna, raha tokony hiarovana ny tsy ampy taona sy hanampiana azy ireny hanitsy ny fitondrantenany, dia natao hanomezana vàhana ny polisy handray tsolotra avy amin'ireo fianakaviana manankarena niavian'ireo mpampijaly, mba tsy horaisina ho tomponandraikitra taminà heloka bevava.
Ao anatin'ny iray amin'ireo randram-baovao miresaka ny fahafatesan'i Zhang Chaofan ao amin'ny Weibo, sehatra sosialy Shinoa malaza, notsipihan'ny mpisera iray ny olana goavan'ny kolikoly any anatin'ny fanadihadiana :
Tena manontany tena aho hoe karazana sazy toy inona no ho ampiharina amin'ireo mpampijaly, ahoana no ho fihetsiky ny ray aman-drenin'izy ireny, ary raha manome onitra ho an'ny fianakavian'ny niharam-boina ry zareo! Na ny sekoly aza miezaka ny tsy maneho hevitra momba ilay olana. Toy ny manan-javatra matanjaka efa voaomana ireo mpampijaly.
Iray hafa mpaneho hevitra no manontany momba ilay Lalàna ho Fiarovana ny Tsy Ampy Taona :
Te-hanontany fotsiny aho : Iza marina moa no arovan'ilay Lalàna ho Fiarovana ny Tsy Ampy Taona? Iza no tokony hoarovana? Ahoana no hahalasa ny lalàna ho elo fiarovana ny tanora, raha ny ankamaroan'ireo voan-dry zareo koa aza tsy ampy taona nefa tsy voaaron'ilay Lalàna ho Fiarovana ny Tsy Ampy Taona akory? Inona no tokony hianteheran-dry zareo hanànany fiarovana ny tenany [amin'ny setrasetran'ireo mitovy aminy]? Noho io lalàna io, tsy mitady ny rariny akory aza ry zareo. Inona no ilàna io lalàna io?
Manana ny Lalàna ho Fiarovana ny Tsy Ampy Taona isika, saingy mila manao Lalàna ho Famaizana ny Tsy Ampy Taona koa, satria tsy fialàna tsiny hatrany ny maha-tsy ampy taona mba hahafahana miala tsy ho tomponandraikitra sy tsy ho voasazy, jereo ny hamaroan'ny raharaha notanterahan'ireo ankzy tsy ampy taona.
Mihamaro ny olona mino fa ilaina ny sazy fanonerana mba hampitsaharana ny herisetran-jatovo. Araka ny fitsapankevitra iray natao tety anaty aterineto, nampanaovin'ny Weibo, maherin'ny 99% tamin'ireo namaly, tamin'ireo olona 1.920 nandray anjara hatramin'ny 12 alin'ny 18 May teo), no mino fa ilaina ny sazy henjana.
Eo ambanin'ny lahatsoratra iray ao amin'ny Weibo momba ilay fitsapankevitra, tohizan'ny olona ifanakalozana fomba fijery ilay lohahevitra. Ireto ambany ireto ny fanehoankevitra malaza indrindra mitaky ny hisian'ny sazy fanonerana, toy ny hoe :
Famonoana niniana natao. Tsy ijerena izay fahasalaman-tsaina na taonan'ilay namono, fa satria izy nahavita namono, dia tokony ho afaka hizaka ny andraikiny.
Ny sasany manome sosokevitra hanaovana lalàna vaovao hiatrehana ny kolontsaina fampijaliana any an-sekoly:
Tsy vitantsika ny hanaisotra tsirairay ireo ahidratsy. Fampijaliana any an-tsekoly, ny herisetran-javoto, ireny karazana fitondrantena tsy mivoatra rehetra ireny dia maka ny fàkany daholo avy any anatin'ny fiarahamonina sy ny ankohonana. Tokony hànana lalàna manohitra ny fampijaliana isika ary fanabeazana sy fampiharana ny lalàna amin'ireo mpampianatra, ray aman-dreny sy mpianatra. Tena ilaina ny firotsahana an-tsehatr'ireo niharan'ny fampijaliana sy ireo mpiaro azy raha tiantsika ny hampiato ny kolontsain'ny fampijaliana. Tsy vitantsika ny hiatrika ny toedraharaha amin'ny fandraisana tsirairay ny tranga miseho.
Ny sasany indray misaina lalina momba ny fototra miteraka ny herisetran-jatovo :
io no vidin'ny fandrosoana mihazakazaka be iainan'ny firenentsika: Rehefa avela any an-tokantrano, tsy ampy fanarahana maso avy amin'ny ray aman-dreniny ireny tanora ireny, dia mipoaka mafy ny toetra tia herisetra ao amin'izy ireo rehefa voafafa nandritry ny fotoana ela ny aminy. Mety ho zavadehibe ny hamaroan'isa ao anatin'ny vahoaka, fa tsy toy izany ireo olana tsy voavaha mikasika ny fiahiana, irariako ny mba hahavitan'ny tanindrazana malalako hamàha ny olana tahàka izany ary tsy hamela velively ny hiverenan'ireny tranga mahatsiravina ireny indray.